राजा महेन्द्र, योगी नरहरिनाथको थुना र वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) राजा महेन्द्र, योगी नरहरिनाथको थुना र वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ !
राजा महेन्द्र, योगी नरहरिनाथको थुना र वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ !
२८ साउन, काठमाडौं । योगी नरहरिनाथ पिताजीलाई भेट्न आइरहन्थे, आमा र दाईदिदीहरूले चर्चा गर्दा मैले योगीजीको नाउ थाहा पाएको थिएँ ।
योगी राजा महेन्द्रका उच्च प्रशंसक थिए तर एकचोटी राजा महेन्द्रले उनलाई लामै समय ‘निश्चित अवधि सम्झना भएन’ थुनिदिएका थिए । उनै नरहरिनाथ थुना मुक्त भएछन् र डिल्ली बजारको सांस्कृतिक केन्द्रमा उनको भाषण हुने भएछ ।
तिथि मिति सम्झना छैन , म स्कूल मै पढ्थे जस्तो लाग्दछ ,बासु दाई ‘बासुदेव आचार्य , बोहोरेटार’ हो वा अरू नै कोही अग्रजसँगै म पनि उक्त स्थलमा पुगेँ !
त्यहाँ नरहरिनाथले भनेका अरू कुरा सम्झना भएन तर उनले भनेको एउटा कुरा भने मेरो मनमा गडेर बसेको छ ।
उनले भनेका थिए । राजाको झन्डा र राष्ट्रको झण्डा फरक हुनुहुन्न ।
हो म ईश्वर मान्दिन तर मेरो देशका करोडौं जनताको धार्मिक भावनाको सम्मान गर्न म मन्दिरमा जान्छु
स्मरणीय छ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भन्दा राजाको झण्डा फरक थियो । राजाको झण्डामा सिंहले झण्डा समाएको देखिन्थ्यो ! लाग्दछ, यिनै आधारमा उनले राजा महेन्द्रको आलोचना गरेका थिए र उनी थुनिए !
अहिले मुलुकका अत्यधिक ठूलो सङ्ख्याका जनताको धर्म र शासक समुदायको धर्म फरक छ, विश्वास र आस्था फरक छ । उनीहरू ईश्वरको नाउमा पद ग्रहणको शपथ लिंदैनन ! आम जनताको विश्वाससँग जोडिन नै चाहन्नन !
एउटा सानो तर विदेशी शक्तिको भर र बल पाएको समूह र समुदायसँग मात्रै जोडिन चाहन्छन उनीहरू ! त्यसैबाट शासकीय शक्ति प्राप्त हुने विश्वास उनीहरूको देखियो ! उनीहरू जनताको आस्था र भावनाको प्रतिनिधित्व नै गर्दैनन् !
त्यसैले जनताले उनीहरूलाई आफ्नो मान्न सकिरहेका छैनन् !
अस्थिर र गतिहीन अनि सधैं सरकार परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनका कुरा नै स्थायी हुने रहेछन
एक चोटी भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीलाई शान्ति निकेतनका विद्यार्थीहरूले सोधे – तपाइँ ईश्वर मान्नुहुन्न तर पनि मन्दिर जानुहुन्छ नी ? गान्धीको जवाफ थियो । हो म ईश्वर मान्दिन तर मेरो देशका करोडौं जनताको धार्मिक भावनाको सम्मान गर्न म मन्दिरमा जान्छु , जहाँ जनताको आस्था छ त्यहाँवाट म कसरी अलग हुन सक्दछु ? जनताको मन्दिर मेरो पनि मन्दिर हो ।
मुलुकमा दुइ तिहाई बहुमतको सरकार छ ! संवैधानिक र कानुनीरूपमा सरकारमाथि कुनै चुनौती छैन ! तर सरकार संसद्को , कानुनको र संविधानको बलले मात्रै बलियो हुँदो रहेनछ !
अदालत,सेना, प्रहरी, प्रशासन संयन्त्र, संवैधानिक निकाय,बुद्धिजीवी समुदाय, पेशागत क्षेत्र, बिद्यार्थी, ट्रेड युनियनमात्रै नभएर विदेशी गैर सरकारी संस्था र विश्वका शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकहरूको यत्रो ठूलो भर र बल हुँदा पनि सरकार किन अस्थिर देखिएको छ त ?
किन राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तनको कुरा सत्तारूढ दलकै सर्वोच्च नेताबाट बारम्बार आइरहेको छ त ? हाँसी हाँसी असाधारण सहजता प्रदर्शन गर्दै नारायणहिंटी छोडेर हिँडेका र पुन राजगद्दी प्राप्त गर्नमा कुनै लालसा नराखेका तर जनता र सबै पक्षले चाहेमा राज धर्म र राष्ट्र धर्म निर्वाह गर्नबाट पछि नहट्ने ‘सम्भवत निष्काम कर्म चेतना भनेको पनि त्यही हो’ कुरा मात्रै गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले खोक्दा पनि १० बर्षे विद्रोहका नेता र शक्तिशाली सत्तारूढ दलका अध्यक्षको किन सातो गएको देखिन्छ ? किन उनी असन्तुलित बन्न पुग्दछन् ?
योगी नरहरिनाथकै भनाईको मर्मलाई जोडौं । जनताको धर्म एउटा शासक समुदायको धर्म अर्को ! आमजनता कम्युनिस्ट छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता कम्युनिस्ट छैनन्, कम्युनिस्ट व्यवस्था संसारमा लोकप्रिय छैन ! दुइटा हातका औंलामा गन्न सकिने कम्युनिस्ट मुलुक पनि दुनियाँमा छैनन् !
जनताले कम्युनिस्ट पार्टी मनपराएर दुई तिहाई दिएका होइनन्, एउटा सन्दर्भमा केपी ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको दह्रो अडान !
कांग्रेसको मूल्यहिन राजनीति र कांग्रेस नेतृत्वले जनतामा आशा र भर जगाउन नसकेको अवस्था आदि कारणहरूको योग र दुइटा ठूला पार्टीको एकता आदि धेरै कुराले त्यसमा योगदान पुर्याएको थियो । नेपाली समाज , वौद्धिक समुदाय र राजनीतिक अवसरवादिताले पनि भूमिका खेल्ने नै भयो
राजनीति, प्रणाली र दलहरू जनतासँग जोडिएनन भने संविधान,कानुन र सेना-प्रहरी लगायत सिङ्गो राज्यसंयन्त्रमा शक्तिशाली नियन्त्रण भए पनि सरकार कमजोर , अस्थिर र गतिहिन अनि सधैं सरकार परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनका कुरा नै स्थायी हुने रहेछन । सरकार स्थायी भएको आभास नै हुँदो रहेनछ !
अघिल्लो लेखबागलुङमा लाखे नाच्ने मान्छे छैनन्
अर्को लेखक्रिकेटर लामिछानेलाई फेरि दुतावासले बोलायो